Invisalign - Latha Dental Clinic
လူကြားထဲ သွားပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်ဖို့ သင့်သွားတွေဟာ မညီညာ၊ ကျဲနေတာ၊ သွားတွေ ထပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လို့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရပါသလား? Invisalign လို့ခေါ်တဲ့ အကြည်ရောင် သွားစွပ်လေးဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သွားညှိလို့ရနေပါပြီ။
Invisalign ရဲ့ သာလွန်တဲ့အ ချက်တွေကတော့ (1)တစ်ခြားသွားညှိတဲ့ပုံစံတွေလို Bracket တပ်နေစရာမလိုပဲ အကြည်ရောင်အစွပ်လေးကို လွယ်လွယ်ကူကူ တပ်ဆင်နိုင်တာကြောင့် သွားညှိထားခြင်းကို သိသိသာသာ မပေါ်လွင်စေပါဘူး။ (2)အစားစားချိန် သွားတိုက်ချိန်တွေမှာ အစွပ်ကို အလွယ်တကူ ခဏဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်။ (3)အစွပ်ကို လွယ်ကူစွာ ဆေးကြော သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ (4)ခေတ်မှီနည်းစနစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ကုသမှုအပိုင်းကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို သွားပိုင်ရှင်မျိုးတွေ အများဆုံးပြုလုပ်ကြသလဲ?
(1)သွားကြားနေရာမရှိအောင် သွားထပ်နေတဲ့သူတွေ (2)သွားကျဲနေတဲ့သူ (3)ရှေ့သွား/အောက်သွား ထွက်ခြင်း (4)အပေါ်မေးရိုးနှင့် အောက်မေးရိုး မညီတဲ့သူ (5)အပေါ်သွားနှင့် အောက်သွား ဟနေတဲ့သူတွေ Invisalign ကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
Latha Dental Clinic မှာ Invisalign ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တပ်ထားချိန် ၂နှစ်ခွဲ ကြာမြင့်မှာပါ။ ကုသမှုအစမှာတော့ သင့်ရဲ့သွားနေရာ ရွေ့မှာဖြစ်လို့ အနည်းငယ် နာကျင်မှုမျိုးသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် နည်းပညာကိုသုံးပြီး ကုသပေးတာကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာဝန်ကြီးတွေကသာ ကုသမှုပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ သွားအရမ်းထပ်ပြီး ညှိဖို့နေရာလွတ်မရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာသာ သွားနှုတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းအတိုင်း မပျက်မကွက်ပြသဖို့လိုပါတယ်။